I-Semalt Expert On Infection Malware Ukukhusela
Xa iinkqubo zethu zeekhompyutheni zinciphisa okanye ziziphatha ngokungaqhelekanga, kufuneka sihlole ukuba kukho intsholongwane okanye ayikho. Ngokuqhelekileyo, abantu abaqondi ukuba izixhobo zabo zekhompyutha zisulelwe yi-malware okanye ii-virus ezibangele umonakalo omkhulu. Inani elikhulu labahlaseli likuthumelela ii-imeyile ezinokukrokra kwaye uzame ukukugibela ngenye indlela okanye enye.
Nangona kunjalo, akukho nto inokukhathazeka ngayo njengoko unokukhusela isixhobo sakho ngokugcina engqondweni izinto ezilandelayo zinikezwa ngu-Oliver King, uMphathi weMveliso yoMqhubi we-10 (Semalt .
Gcina impilo yeziko lakho
I-Google ikhuthaza abasebenzisi bayo kunye nabaphathi bewebhu ukuba benze uphando olufanelekileyo. Imimandla eyahlukeneyo yeGoogle kunye neConsole Console inokukunceda uqaphele imiba enokubakho kwimizuzu. Ngokomzekelo, unokuzama ukukhangela isayithi yeGoogle ukujonga oko kuye kwafakwa indexed kude. Ingcinga efanelekileyo kubaphathi bewebhu njengoko banokuqiniseka ukuba izinto zihamba kakuhle. Kwakhona kubalulekile ukuba ukhawuleze uphendlo lwakho kumaphepha athile kuphela. Umzekelo, ukuba i-injini yokukhangela ibheka iphepha leBlogspot, ngoko unako ukuwahambisa kwakhona kumaphepha afanelekileyo kwaye akhuselekileyo kuphela. Amaphepha e-Search Queries ahlula inani elikhulu legama elingundoqo likaGoogle elifumaneka kwiwebhusayithi yakho. Ukuba ubona ukuba amanye amagama angundoqo angalindelekanga abuye avezwe, lixesha lokubamba bonke ngaphambi kokuba lide kakhulu kwaye isayithi lakho liye lahleka. Uludwe lwephepha loKhuseleko lweeNgcaciso zamanqaku ezinqabileyo zewebhu kunye namanqaku angenakho iikhowudi ezinobungozi. I-Fetch Njengoko ukhetho lwe-Google luvumela abasebenzisi balo ukuba babone oko iGoogle ihamba khona..Ukuba ubona ukuba likhwele iphepha elikhulelwe, kufuneka ulisuse kuloluhlu ngokukhawuleza.
Uluhlu lokuhlola ukhuseleko
Kubalulekile ukuba uqaphele iwebhusayithi yakho rhoqo. Ngaphandle kwalokhu, kufuneka ukhethe amaphasiwedi anamandla njenge-webmaster. Ungaqwalasela izikhokelo ze-Gmail zokukhetha iiphasiwedi ezinamandla. Ukuthabatha abanikeli bokuqukethwe benkcazo yesithathu yinto efanelekileyo, kodwa kufuneka nenze oko ngokucophelela kwaye niqinisekise ukuba abakunikezeli ngokuphindaphindiweyo kwaye bakopiwe umxholo njengoko kunokulimaza iwebhusayithi yakho kwizinga eliphezulu. Kufanele uqhagamshelane nomniki-nkonzo wakho we-intanethi okanye webhuseli ngenkonzo eqhubekayo kunye neengcebiso malunga nokuhlala ukhuselekileyo kwi-intanethi. Uninzi lweenkampani lunikezela abathengi babo ngokuhlaziya rhoqo malunga nendlela yokugcina amaphepha kunye neengxelo zikhuselekile. Ukuba akho amaphepha okanye amawebhusayithi anokufumana izibonelelo ze-RSS, kufuneka umeme abantu abaninzi ukuba babhalise. Ngethuba usebenza kwi-intanethi, kufuneka wenze ii-workstations zakho zendawo zihlaziywe kwaye ufake iinguqulelo zeefayili zokucoca ii-virus kunye neTrojans.
I-Webmasters ene-server yokungena
Kufuneka ujonge ukulungiswa kweseva yakho rhoqo. I-Apache ineengcebiso ezahlukeneyo zokulondoloza ukhuseleko kubasebenzisi bayo, kwaye iMicrosoft ineloluhlu lwezibonelelo zeteknoloji ukuze ukhululeke. Bacela abasebenzisi babo ukuba banake ingqalelo kwiimenenja zeekhowudi, ukubhalwa kwemfihlo kunye nokuqinisekiswa kwewebhusayithi. Kufuneka wenze kwakhona ikopi yokugcinwa kweefayile zakho ukuze zingalahlekanga nangona iwebhusayithi yakho ithambile. Kubalulekile ukuba wonke umsebenzisi ahlale ehlaziywa kunye nesofthiwe yesimanje kwaye aziswe ngolwazi lwazo kunye neenguqulelo ezintsha. Kukho ezininzi izixhobo kunye nesofthiwe ekunceda ukuphuhlisa iwebhusayithi ngaphakathi kwemizuzu, kodwa ukukhetha ithuluzi elifanelekileyo kubaluleke kakhulu kodwa kubalulekile njengoko kukho iindlela ezahlukeneyo apho. Kufuneka ugcine iliso kuzo zonke izandiso kunye neefayile ze log. Ukuba ezinye zeefayili zikuqondisa kwiindawo ezingaziwa, kufuneka uzikhuphe kwinkqubo yakho yekhompyutheni ngokukhawuleza. Kufuneka uhlolisise iiwebhsayithi zakho kwiindawo ezibuthathaka eziqhelekileyo kwaye ugweme ukuba nerekhoda eneemvume ezivulekile
I-Google ithi kufuneka sisebenzise i-SFTP kunye neSSH yokudlulisa idatha. Zombini zale nkqubo zigcina iindawo zakho zikhuselekile kwizinto ezisongelayo. Ibhulogi ye-Google Online Security inikezela ngeengcebiso ezininzi malunga nokukhuseleka kwe-intanethi nokukhuseleko, ngoko kufuneka uhlolisise rhoqo Source .